नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचन भएको छ । यसलाई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पक्षको सुरुवातको रुपमा लिनुपर्दछ । दुई पार्टी मिलेर चुनावमा जाँदा अहिले वाम गठबन्धनको वर्चस्व देखिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन रहेको अवस्था छ । अहिले डेमोक्रेटिक शक्ति बाहिर रहेको अवस्था छ । जताततै वाम गठबन्धन सत्तामा देखिएका छन् ।
यो वर्षको मे २० तारिखमा नेपालीले तेस्रो नेपाल डे परेड मनाउने सुरसार गरेको छ । अमेरिकाको मुख्य शहरमा परेडका लागि स्थान पाउनु आफैंमा गर्वको विषय हो । संसारकै राजधानी मानिने न्यूयोर्क शहरको म्याडिसन एभेन्यूमा नेपालीले दुई पटक परेड देखाइसकेको छ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल वाम एकताको प्रतिवेदन तथा विधान मस्यौदा कार्यदलको प्रमुख पनि हुन् । उनी समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँछन् । अब त्यसमा छलफल हुने र शीर्ष तहमा भएको छलफलले त्यसलाई अन्तिम रुप दिने पनि बताउँछन् ।
टर्कीको अन्तालिया शहरमा टर्किस नै बिहे गरी घरजम गर्दै आएका कुमार श्रेष्ठ गत वर्ष ४ महिना अमेरिका बसेर न्यूयोर्कबाट टर्की फर्किने बेलामा रहर पूरा गर्न भनी अमेरिकामा किनेको आईफोन ७ को बिल इत्यादिका बारेमा चिन्ता गर्दै थिए ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जोड दिएका छन् । खनालले यो संविधान लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण र प्रगतिशील भएको भन्दै यस्तो संविधान निर्माण गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तीनै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेकाले अब आर्थिक समृद्धिमा सबै होमिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अमेरिका र भारतमा समेत निकै लामो समय नेपालको तर्फबाट राजदूत भएर काम गरेका भेषबहादुर थापा पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुन्। युरोपियन युनियनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनको सबैतिरबाट आलोचना भइरहेका बेला हामीले थापासँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्यौं।
नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । आफू सत्तामा रहँदा गराएको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेपछि अझ बढी नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रबाटै कटाक्ष सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथा कांग्रेसमा विचार शून्यता देखिएको भन्दै कांग्रेसका केही युवा नेताले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
रेखा थापा न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्किएपछि ‘न्यूयोर्कको सडकमा नेपालमा जस्तै घरबारविहीन भिखारीहरु भएको’ बताइन् । सामान्य पर्यटकले जे देख्छ त्यही उद्धृत गरिन् तर पर्यटकलाई न्यूयोर्कको सडकमा भएको अधिकांश भिखारीहरु व्यापार गरिराखेका हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा प्रष्ट वक्ताका रुपमा परिचित छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका शर्मासँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नेपाली कांग्रेसको भूमिका, युवाको योगदान, वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्ने
अमेरिका जस्तो अपार सम्भावना भएको मुलुकमा आफ्नो संगठन प्रभावकारी ढंगले चलोस् भन्ने अपेक्षा कुनै पनि संस्थालार्इ हुन्छ । म नेपालमा स्कुल जीवनदेखि नै नेविसंघमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मानिस हुँ । आजसम्म पनि औपचारिक, अनौपचारिक हिसाबले मैले संगठनमा सकेको योगदान दिदै आएको छु । अर्को महत्वपुर्ण कुरो यो विद्यार्थीको संगठन हुनाले यसको नेतृत्वकर्ता पनि विद्यार्थी नै हुन जरुरि छ ।
लामो समय स्थानीय निकायमै काम गरेका डोरमणि पौडेल हेटौंडाको मेयरका रुपमा दुई कार्यकाल बिताएका व्यक्ति हुन् । त्यसपछि नगरपालिका संघको नेतृत्व लिएर १६ वर्षसम्म स्थानीय निकायका लागि आवाज उठाएका उनी प्रदेश नम्बर तीनको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
‘अमेरिका देश होइन, निगम हो, संस्था हो ।’ यो अभिव्यक्ति दिन कठिन छैन र प्रमाणित गर्न पनि कठिन छैन । अमेरिकामा नै बसेर यस्तो लेखिरहँदा भोलि मलाई सरकारी निकायले ‘हाम्रो देशलाई देश नै होइन भन्नेले प्रमाणित गरेर देखाऊ ?’
आज हामी बदलिंदो विश्व भनिने २१औं शताब्दीमा छौं । एकातिर दिनानुदिन नयाँ–नयाँ आविष्कार, विकास र प्रयोग अनि अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो आर्थिक असमानताका बीचमा हामी संसारकै गरिब भनेर चिनिने मुलुकको नागरिकका रुपमा रहन बाध्य छौं ।
डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् पूर्वगभर्नर पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा निकै राम्रो जानकारी भएका खतिवडा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै गरी अघि बढ्ने दाबी गर्छन् ।
भर्खरै सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई ४ वटा गाडीसहित सेवासुविधाहरु थप ग¥यो । तराईका शीतलहरपीडितले एक थान कम्बल र जाजरकोटका महामारी पीडितमाझ स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकी चक्की ओखतीको अभावमा ज्यान गुमाउन परिरहेका बेला पूर्व विशिष्टज्यूलाई वृद्धि गरेको यो सुविधाले अहिले व्यापक आलोचना पाएको छ ।
अमेरिका आउने अधिकांश नेपालीहरुको पहिलो काम गर्ने क्षेत्र ग्यास स्टेशन रहेको भेटिन्छ । विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुदेखि कागजी प्रक्रियामा रहेका र आप्रवासीका रुपमा आएका अधिकांशको कामको सुरुवाती क्षेत्र ग्यास स्टेशन वा कन्भिनियन्स स्टोर नै रहेको हुन्छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली एमालेभित्रका बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । ज्ञवाली वाम एकताका एक योजनाकार पनि हुन् ।
बेथिति, बेइमानी र बिसंगतीको पनि हद हुन्छ । आफ्नै आँखा अगाडि भएको चोरीको मूकदर्शक बन्नु पर्दा मन असाध्यै कुँढिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा निकै कमजोर परिणाम हात पारेपछि अहिले कांग्रेसभित्रै विभिन्न कोणबाट आरोप–प्रत्यारोपसँगै समीक्षा पनि भइरहेको छ ।
प्रवास पीडा – महँगो शहर, संस्कार अनि कर्मकाण्डी आडम्बर
यो ‘समाजले के भन्ने हो’ भन्ने मनोदशामा हामी निकै पीडित र प्रताडित हुने गर्दछौं । यो उता नेपालबाटै बोकेर ल्याएको जीर्ण रोग अनि महामारी हो, त्यो निरन्तर हरेक मनहरुमा यो प्रवासमा पनि फैलिरहेको छ । त्यसरी हामी आफैंले आफैंलाई चिमोट्छौं, चिथोर्छांै अनि दुखाउँछौं । आफू के हुँ र आफ्नो औकात के हो अनि कति छ भन्ने कुराको मतलब नगरी अरुलाई तौलन हामी आफ्नो अमूल्य समय खेर फाल्छौं ।
आखिर भोट नै त रहेछ
पछिल्लो गैर आवासीय नेपाली संघ एन आर एन अमेरिकाको चुनावमा अध्यक्षका उम्मेद्धारहरुको भोटको जोड घटाउले वजार निकै गर्मिएको थियो । मुख्यतः तत्कालीन समयका कडा
प्रतिस्पर्धी डा. केशव पौडेल र गौरी जोशी मध्य कस्को भोट वैक बलियो भन्ने कुरामा एन आर एनहरुका हर्ताकर्ता भन्नेहरुकै विचमै निकै तत्लो स्तरको माथापच्चि पनि चलेको थियो ।
तत्कालीन समयमा डा. केशव र गौरी दुवैले आ–आफ्नो भोट वैंक वलियोे वनाउन खुला ह्दयले पैसा खर्चेका विषयमा पुरै नेपाली समाज अनभिज्ञ छैन । दुवै पक्षले यसका लागी आ–आफ्नो सम्र्पक सुत्र भरपुर प्रयोग गरेका पनि थिए । रमाइलो त के थियो भने एकले अर्को पक्षलाई पैसा तिरेर सदस्य बनायो भनि सामाजिक संजालहरु रंगाइरहदा आफू पनि रातो दिन पैसाको खोलो वगाइ सदस्यता वनाइरहेको देखिन्थ्यो । कुनै कुनै अध्यक्षका उम्मेद्धारहरुले त आफूले पैसा खर्च गरेर सदस्यता दिएकोमा गर्व गर्न पनि पछि परेका थिएनन ।
कांग्रेस र चुनावी नतिजा
नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावले धेरैको ध्यान तानेको छ । विशेष गरेर यो पटक देशको जेठो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टि नेपाली कांग्रेशको सर्मनाक पराजय सवैका लागी चर्चाको विषय वन्यो ।
एनआरएनए टेक्ससको कार्यदिशा
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधि मुलुक साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको राज्य च्याप्टरको रुपमा एनआरएनए अमेरिका टेक्सस च्याप्टर रहेको छ । संस्थाको भुमिकाकै साझा भएकाले यो च्याप्टर टेक्सस राज्यमा रहेका नेपालीको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ । टेक्सस राज्य भित्र बसोवास गर्नुहुने आम नेपालीको प्रतिनिधि मुलुक संस्थाको रुपमा यसले काम गर्नेछ । व्यक्तिगत तहवाटै मात्र होइन टेक्ससमा विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरुको विभिन्न संघसंस्थासग पनि सहकार्यमै यो संस्था अघि बढ्नेछ ।
सामाजिक संस्थामा लाग्ने के गाली खान हो ?
कमजोरी सबैंमा हुन्छ, सुध्रनेपर्ने ठाउ सबैंमा हुन्छ, यो बताउने अरुले नै हो तर सेतोलाई कालो भनेर त्यसले एक छिन आत्मरती मिलेपनि त्यो सत्य हुन सक्दैन, त्यो चरित्र हत्या बाहेक अरु हुन सक्दैन । दुःख केवल यत्तिमै हो, यो समाजले मलाई वुझेको छ , केहीले आलोचना गर्लान् तर यसमा मलाई भन्नु केही छैन, मर्ने बेला पनि भगवानको नाम लिनुपर्दछ, झुठको खेती बढी टिक्दैन ।